उपचार खर्च तिर्न नसक्दा ६ महिनादेखि अस्पतालमै : पैसा खोज्न गएका बुवा फर्किएनन्:: Mero Desh
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा ६ महिनादेखि अस्पतालमै : पैसा खोज्न गएका बुवा फर्किएनन्
Published on: २२ पुष २०७६, मंगलवार १४:०१
विराटनगर : संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका १० चन्दनपुरका २० वर्षीय जीवन भुजेल उपचार खर्च तिर्न नसक्दा ६ महिनादेखि विराटनगरको एउटा अस्पतालमै बस्न बाध्य छन् । उपचारका क्रममा अस्पतालमा भएको पाँच लाख बढी खर्च तिर्न नसक्दा जीवनले विराटनगर अस्पताल एवं विराट नर्सिङ होमबाट बाहिर निस्कन पाएनन् । छोराको उपचारवापत लागेको पैसा खोज्नका लागि भन्दै उनलाई अस्पतालमै छाडेर तीन महिनाअघि घर फर्किएका बुवा गणेश भुजेल पनि अहिलेसम्म फर्किएका छैनन् ।
अरु कोही आफन्तसमेत सम्पर्कमा नआउँदा उपचार सकेर धेरै अघि डिस्चार्ज गर्नु पर्ने बिरामी राख्नु परिरहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनलाई अस्पतालकै कर्मचारीले क्यान्टिनबाट खानेकुरा लगिदिन्छन् र दैनिक हेरचाह गर्छन् । अस्पतालका लेखापाल सुवास पोखरेलले धेरै अघि उपचार भएर डिस्चार्ज गर्दै बिदा दिनु पर्ने बिरामी आफन्त नआएका कारण अस्पतालमै बसिरहेको बताए । उपचारमा अस्पतालले छुट दिन सक्ने भए पनि बिरामी जिम्मा लिने आफन्त र परिवारका सदस्य नआउँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । पोखरेलले अस्पतालले जतिसक्दो चाँडो जीवनलाई परिवारको जिम्मा लगाउन खोजिरहेको बताए ।
जीवन विराटनगर अस्पताल एवं विराट नर्सिङ होमको पाँचौ तलाको सर्जिकल वार्डमा सुरक्षा गार्डको निगरानीमा छन् । श्वासप्रश्वासका लागि घाँटीमा पाइप लगाइएको छ । घाँटीमा गहिरो चोट लागेकाले बोल्न सक्दैनन् । घोत्लिइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ कोही पुग्दा मुसुक्क मुस्कुराउँछन् मात्रै । कसैले प्रश्न सोधेमा हातको इसारा र कपीमा लेखेर जवाफ दिन्छन् ।
उपचारमा संलग्न अस्पतालका नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. राजीवकुमार साहले रड प्रहारबाट जीवनको घाँटीमा गहिरो चोट लाग्नुका साथै श्वासनली साँघुरो भएर श्वासप्रश्वासमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । श्वास फेर्न सजिलो बनाउन घाँटीमा प्वाल पारेर पाइप राखिएको बताउँदै उनले उक्त पाइप धेरै अघि शल्यक्रियामार्फत निकाल्नु पर्ने भए पनि आफन्त र परिवारका सदस्य सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भइरहेको जानकारी दिए ।
शल्यक्रिया जटिल खालको हुने भएकाले अभिभावक सम्पर्कमा आएपछि मात्रै गर्ने तयारी अस्पतालको छ । ‘कोही पनि सम्पर्कमा नभएकाले के गर्ने भन्ने दोधारमा छौं,’ साहले भने, ‘अभिभावक सम्पर्कमा भएको भए धेरै अघि सबै उपचार सकिने थियो ।’ उनले घाँटीको शल्यक्रिया गरेर पाइप निकालेपछि बोली आफैँ खुल्ने पनि बताए । तत्काल पाइप ननिकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी थप समस्या निम्तन सक्ने डा. साहको भनाइ छ ।
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१ मझुवाबेंसीमा गत असार ५ गते बेलुका युवाबीच भएको ‘ग्याङफाइट’को सिकार बनेका हुन् जीवन । उनी मझुवाबेंसीमा खेलमैदान बनाउने जिम्मा लिएर काम गरिरहेका बुवा गणेशलाई भेट्न गएका थिए । सँगै गएका गाउँका साथीहरू २७ वर्षीय पदम कटुवाल र २५ वर्षीय सुवास कटुवालसँग मझुवाबेंसीमै निर्माणाधीन इर्खुवा हाईड्रोपावरका कामदारको झगडा पर्‍यो । झगडा छुट्याउन गएका जीवनमाथि रड प्रहार भयो ।
रडले लागेर त्यहीं ढलेका उनको टाउको, छाती, पेट र घाँटीमा चोट लाग्यो । गम्भीर अवस्थाका उनलाई उपचारका लागि बुवा गणेशले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान हुँदै असार ६ गते विराटनगर अस्पताल एवं विराट नर्सिङ होम ल्याइपुर्‍याएका हुन् । प्रहरीले पनि साथीसँग हाईड्रोपावरका कामदारको झगडा भएपछि छुट्याउने क्रममा जीवनमाथि रड प्रहार भएको जनाएको छ ।
घटनामा संलग्नहरु प्रहरीले चलाएको अभद्र व्यवहार मुद्दा खेपेर छुटिसकेका छन् । प्रहरीले घटनामा संलग्न हाईड्रोपावरका कामदार मोरङको धानपालथान गाउँपालिका ७ का २३ वर्षीय सुशीलकुमार गिरी, १९ वर्षीय प्रल्हाद गिरी, विराटनगर १९ का ३० वर्षीय माधव भनिने सन्तकुमार गिरी र रुद्र गिरीलाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरु जिल्ला प्रशासनले मागेको जनही पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर असार ३० गते नै छुटिसकेका छन् ।
अरु बसेको ठाउँमा पुगेर झगडा गरेको भन्दै जीवनका साथीहरु कटुवालद्वयलाई पनि पक्राउ गरेर प्रहरीले यही मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरु जनही १५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसक्दा कारागार चलान भएका थिए ।
भोजपुर प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरबहादुर सलामी मगरले हाईड्रोपावरका कामदारमाथि आक्रमण गर्न खोज्दा घटना भएकाले जीवनकै साथीहरुको दोष देखिएको बताए । ‘घटनामा जीवनको दोष नभए पनि उनका साथी दोषी छन्,’ उनले भने, ‘घटनालाई लिएर जीवनका परिवारबाट कुनै पनि जाहेरी नपरेका कारण दोषीमाथि अभद्र व्यवहारबाहेक थप कारबाही अघि बढाउन सकिएन ।’ उनको उपचारका लागि हाईड्रोपावरका पेटी ठेकेदार सञ्जय गिरीलाई आग्रह गरिएको मगरको भनाइ छ ।
डीएसपी मगरले घटनाका घाइतेले पैसा तिर्न नसकेको लगायतका विषयलाई लिएर माघ ३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल राखिएको र त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निस्कर्षमा पुगिने बताए ।
विपन्न परिवारका युवा जीवनको उपचार खर्च तिर्न सक्ने अवस्थामा परिवार छैन । उनी परिवारका माइला छोरा हुन् । आमा बितेको १६ महिना बढी भयो । उनका बुवा, एक दाजु, दिदी र दुई भाइ थिए । उपचार खर्च तिर्न नसकेर भाइ अस्पतालमै बन्धक भएको भन्दै ऋण खोज्नका लागि चारैतिर भौतारिरहेका दाजु नवीनले पनि त्यही तनावका कारण गत कात्तिक अन्तिम साता आत्महत्या गरेको स्थानीयले बताए । भदौ १४ गते आमाको वर्ष दिनको काम पनि सकियो । तर दाजुको अन्तिम संस्कार र आमाको वर्ष दिनको काममा पनि जीवन घर पुग्न पाएनन् ।
‘मेरो उपचारका लागि आउनु भएको बुवा पैसा खोजेर आउँछु भन्दै गएर अहिलेसम्म आउनु भएको छैन । उता दाजुले पनि यही तनावले आत्महत्या गर्नुभयो भन्ने सुनें,’ कापीमा लेखेर जीवनले भने, ‘म भने अस्पतालमै बसिरहनु परेको छ । हामीसँग सम्पत्ति नभएकैले यस्तो अवस्था आयो ।’ सम्पत्तिका नाममा आफ्नो परिवारको एउटा झुप्रो घर र एक गह्रा बारी बाहेक केही पनि नभएको उनको भनाइ छ ।
अन्नपूर्णसँगको सम्पर्कका क्रममा जीवनका बुवा गणेशले उपचार खर्च तिर्न नसक्दा छोरो अस्पतालमै रहेको र आफू आउन नसकेको बताउँदै भने, ‘पैसा जुट्नसाथ आइपुग्छु । उपचार खर्चका लागि सहयोग गरेर छोरालाई अस्पतालबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्न सबैमा अपिल गर्छु ।’
जीवनकी छिमेकी विमला भण्डारी चापागार्ईंले युवालाई सहयोगका लागि गाउँ र विदेशमा रहेकाबाट सहयोग संकलन अभियान सुरु गरिएको बताइन् । ‘ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारका युवा पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा लामो समयदेखि बन्धक बनाइएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पैसा अभावमै पूर्ण रुपमा उपचार पनि पाउन नसकेको पाइयो ।’ चापागाईंले उपचार खर्च तिरेर लामो समयदेखि अस्पतालमै बस्न बाध्य युवालाई बाहिर निकाल्नका लागि थालिएको अभियानबाट ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन भइसकेको र धेरैले सहयोग गरिरहेको जानकारी दिइन् ।